किन सारे डा. केसीले अनसन ?
Tuesday, 13 Mar, 2018 3:48 PM
२९ फागुन, काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसीले आजदेखि अनसन बस्ने घोषणा केही दिनअघि नै गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पद त्याग्नुपर्ने माग गर्दै उने अनसनको घोषणा गरेका थिए । तर, आजदेखि उनी अनसन बसेनन् । पाँच दिनपछि सारेका छन् ।
सोमबार भएको विमान दुर्घटनाका कारण उनले अनसन सारेका हुन् । दुर्घटनामा चिकित्सकको पनि निधन भएकाले शोकको घडीमा अनसन स्थगित गरिएको डा. केसीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले नै पराजुलीलाई पद छाड्न दिइरहेको बेला आफ्नो अनसनलाई केही पर धकेलेको पनि उनी निकट एक डाक्टरले बताए । केसी स्वयंले न्यायाधीशहरुको दबाबमुलक कदमको स्वागतसमेत गरेका छन् । न्यायाधीशहरु नै जोडबलमा लागेपछि अफू केही दिन वातावरण बुझ्ने पक्षमा केसी पुगेका हुन् । उनले ४ चैतदेखि अनसन बस्ने बताएका छन् ।